Asụsụ Ahụ Dijitalụ na Nzukọ Ahịa Online | Martech Zone
Dị ka ọ dị taa, ndepụta m nke akwụkwọ m ga-agụ dị omimi. Enwere m obi ụtọ ikwu okwu na Nzukọ Ahịa Online na Houston n'aha Compendium.
Na nzuko ahụ Steven Woods nke Eloqua. Isi okwu Steven na mkparịta ụka ya nwere nghọta ma na-akpali echiche. Steven wepụtara akwụkwọ ahụ, Asụsụ Ahụ Dijitalụ - Nkọwapụta Ebumnuche Ndị Ahịa na Onlinewa Ntanetị:
Mgbasa ahịa na-enwe mgbanwe dị ukwuu nke mgbanwe nke ụzọ ndị mmadụ na-achọ na-eri na-eweta. Ma ọ bụ ikike Google nwere ime ka a nweta ihe ọmụma nke ịntanetị ma ọ bụ ikike mgbasa ozi iji jikọọ ndị mmadụ na ndị ọgbọ maka echiche ziri ezi banyere ngwaahịa na ọrụ, ụzọ anyị si enweta ozi ma chọọ ngwaahịa agbanweela.
Isiokwu nke isi okwu Steve bụ: Etu ị ga - esi ghọtakwuo omume ịntanetị nke ndị ahịa gị na uru ọ bara na ya. Steven na-adụ ọdụ ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịzụlite ahịa ha ma mụbaa ahịa ha:
Wepu ihe omuma gi.
Chee echiche dịka onye na-azụ ihe.
Were data kpọrọ ihe.
Mee omenala nyocha.
Izi ozi a nọgidere na-agbanwe agbanwe n'oge nzukọ a - jiri ngwa ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, jiri data mee ka mkpa gị na ndị ahịa gị na atụmanya gị pụta, ma tụọ mgbe niile. Na-agbanwe agbanwe, ndị ọkà okwu niile mere ka ndị bịaranụ bulie mbọ nyocha njikarịcha nyocha ha.
Ndị ọrụ ibe Richard Evans si Silverpop nwere ụfọdụ nsonaazụ gbara ọkpụrụkpụ nke itinye mgbasa ozi mmekọrịta na njikọ njikọ ntinye aha n'ime ozi ịntanetị. Njikọ aka Digg rụpụtara nke kachasị, mana njikọ ndị ọzọ iji kwalite izipu ozi na Facebook rụkwara nke ọma. Richard kwere nkwa ịgbaso akwụkwọ ọcha na otu njikọ njikọ mmekọrịta na email. Ikekwe enwere m ike ị nweta akwụkwọ izizi iji kọọrọ gị ọhụụ!
Ọrụ Email ka dị oke egwu
Ogologo oge enyi, onye ndụmọdụ, na ọkà okwu ihu ọha Joel Akwụkwọ rụrụ ọrụ dị egwu nke na-akọwa mmalite nke ahịa yana etu email si aga n'ihu na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nkwukọrịta ụbọchị anyị. Na Compendium, anyị na-eji Kpọmkwem Ngwaọrụ na 5Bọket ọtụtụ iji kpalite mkpọsa agụmakwụkwọ site na Salesforce.
Email na-aga n'ihu ịkwalite nkwukọrịta anyị na ndị ahịa anyị na-enweghị mkpa ịgbakwunye akụrụngwa mmadụ. ExactTarget na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ike anyị iji rụpụta ọrụ ndị ahịa anyị, nke mekwara ka nsonaazụ ha improves na-eduga n'inweta njigide ka mma.
Na mpaghara mgbasa ozi, ọ bụghị ihe ijuanya na ha abụọ Facebook na Twitter na-eji email nke ọma dị ka usoro ntinye iji mee ka ndị ọrụ ha tinye aka na ịlaghachi na weebụsaịtị ha.
Tags: Auditing ikaokwu
CSS njikarịcha maka iPod na iPhone Safari
Jun 17, 2009 na 12: 45 PM
Daalụ maka okwu ọma ahụ, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga-atọ gị ụtọ. Ana m atụ anya ijikọ ọzọ na ihe omume ọzọ.